Jereo hoe inona avy ireo dingana hananganana Yorkshire mahery setra | Tontolo alika
Ahoana no hampiofanana Yorkshire mahery setra
Lourdes Sarmiento | | Training
Fahita amin'ny alika fa ny tsy fisian'ny fiaraha-miasa amin'ny hafa, ny toe-javatra miteraka fihenjanana sy fanabeazana ratsy satria zanak'alika izy ireo, no niavian'ny olan'ny fitondran-tena sy ny ady mahery setra miverimberina fa ankoatry ny tsy faniry dia mety hisy vokany ratsy eo aminao sy ny biby fiompy.
Hiresaka momba an'ity karazana fihetsika manahirana ity amin'ny biby fiompy kely toy ny Atsinanana Region ary ny fomba fanabeazana azy hitondra tena mety. Ity biby fiompy bitika kely ity dia mazàna somary tsotra ny anazatra ary rehefa vita aloha dia azo antoka Tsy hanome anao karazana olana masiaka izany.
1 Mora nampiofana ny Yorkshire
2 Inona no mahatonga ny alika masiaka?
3 Tsy maintsy jerenao ny pitsopitsony sy ny fikarakaran'izy ireo
4 Inona no hatao raha masiaka amin'ny fianakavianao sy ny olon-kafa ny terra Yorkshire?
4.1 Raha miaro tena ny alika rehefa manatona ny habakabany ianao
Mora nampiofana ny Yorkshire
Na izany aza, mety misy toe-javatra sasany izay miteraka fihetsika mahery setra amin'ireo tongolo kely ireo, ny iray dia ny tsy fisian'ny fiarahamonina na ny fomba nitondrana izany diso ary ny iray hafa dia ny nandia toe-javatra nahatsiravina izay mitarika fihetsika mahery setra izay sarotra ovaina.
Amin'ny maha-tompon'ny alika anao dia zava-dehibe ny hamarihanao raha mampiseho ny marisika ao an-trano miaraka amin'ireo olona hafa ao amin'ny fianakaviana izy na dia miaina isan'andro aza izy ireo, miaraka amin'ny olon-tsy fantatra ary mazava ho azy miaraka amin'ny alika hafa. Raha manatrika ianao soritr'aretin'ny fahasosorana sy ny fanintonana, ilaina ny fandraisanao fepetra eo noho eo izay mitarika amin'ny dingan'ny fanabeazana indray ilay alika.
Ireo hetsika ireo dia hamonjy anao amin'ny aretin'andoha maro amin'ny ho avy ary hanakana ny olana tsy handray refy lehibe ary noho izany dia ho sarotra kokoa ny manafoana. Tianay ny manasongadina fa ny fiofanana mialoha amin'ny alika kely toy izany, ary bebe kokoa rehefa misy zaza ao an-trano, no zava-dehibe indrindra, fa raha mbola mampiseho fitondran-tena sasany tsy mifanaraka amin'ny toerany, tandremo fa hanome anao tolo-kevitra vitsivitsy momba ny fampiofanana azy izahay.
Inona no mahatonga ny alika masiaka?
Mila mahatakatra ianao aloha izay fihetsika tena mahery setraOhatra, raha moka na mimenomenona ilay alika indraindray, dia tsy voatery ho biby mahery setra. Ankehitriny rehefa manolotra fiovana tampoka amin'ny fitondran-tenany izy, manafika olona, ​​alika hafa ary manaikitra aza, dia azo antoka fa miatrika tranga mahery setra miharo herisetra isika.
Ireo fiheverana an'ny alika ireo dia manana fiaviana maro:
Ny fiaraha-miasa mahitsy dia zava-dehibe amin'ny alika, rehefa tsy ampy, tsy eo na tsy notanterahina tamin'ny fomba mety dia hiteraka olana eo amin'ny fitondran-tena izany. Izany dia misy ny dingan'ny fifandraisana amin'ny olon-kafa, amin'ny alika hafa na biby fiompy hafa ary amin'izay rehetra manodidina azy.
Ny dingana dia tokony hatao hatramin'ny fahazazany mba hahafantaran'izy ireo ny toerana misy azy ireo amin'ny tontolo samihafa iasan'izy ireo, izay hataon'izy ireo miadana.
Amin'izay tranga izay, ny alika nandalo ny fizotran'ny fiaraha-monina dia mety haneho fihetsika mahery setra:
Amin'ny toe-javatra izay miteraka fanahiana.
Noho ny adin-tsaina.
Noho ny trauma sasany niainana.
Noho ny tahotra.
Olana ara-pahasalamana vitsivitsy.
Tsy nanana fiarahamonina ampy izy.
Amin'ny tranga manokana an'ny Yorkshire terrier, dia ny karazana iray izay nampiasaina hihazaza taloha ary mety ireo fiandohana ireo dia mety hisy fiatraikany amin'ny fihetsika mahery setra izay mipoitra tampoka amin'ireo zaza ireo.
Ary vao manonona ity teny ity mifandraika amin'ny habeny bitika izy dia tonga ara-potoana lazao fa maro ny tompona Yorkshire no mirona amin'ny fiarovana azy ireo ary miaro azy ireo loatra ary izany dia tsy isalasalana fa mitarika fihetsika ratsy ao amin'ny biby fiompy satria mahatsapa fa afaka maka ny habaka misy azy izy. Ity karazana fitondran-tena ity dia tena mora foana ny mamono azy rehefa alika kely fotsiny izy ireo, rehefa antitra izy ireo dia somary sarotra kokoa saingy miaraka amina fiofanana sy fanoloran-tena no ahazoana vokatra tsara.
Tsy maintsy jerenao ny pitsopitsony sy ny fikarakaran'izy ireo
Ny alikanao dia hanome anao marika mazava be fa ho avy ny fitondran-tena tsy mendrika, mila mihaino tsara fotsiny ianao ary mandray andraikitra avy hatrany, ohatra ary rehefa tsy mamita ny toerany ao anatin'ny ambaratongam-pahefana voajanahary ao an-trano ny biby fiompinao, raha izany koa miteraka fanararaotana sy kiakiaka tsy an-kijanona na raha miteraka fanahiana na fihenjanana be ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny dia mila mandray andraikitra ianao.
Na izany aza, ao anatin'ireny fepetra ireny dia tsy azo atao ny mampiditra azy io amin'ny alàlan'ny fiofanana ary noho izany dia tsy hianatra ny hifandray amin'ny olona na amin'ny alika hafa. Alohan'ny hanombohana ny fiofanana dia ilaina izany manome tontolo iadan-toerana ary fandriampahalemana 30 andro mitohy farafahakeliny, aorian'izay izy vao afaka miofana.
Ny traikefa ratsy miaraka amin'ny olona na canine hafa dia mety mampatahotra, na ny fihetsika mahery setra na ny fitehezana dia vokatry ny tahotra aza. Amin'ny maha tompona biby anao dia tsy maintsy manana toetra milamina ianao ary tena zava-dehibe ny tsy fanerena azy hanao zavatra toheriny. Avelao ny tahotrao ny biby fiompinao ary amin'ny sitrapony dia manakaiky alika hafa izy, eo ambany fifehezanao hatrany mba hisorohana ny toe-javatra tsy mahazo aina.
Ny fiaraha-monina dia singa iray lehibe hamaritana ny fihetsiky ny alika, na ho tsara na ho ratsy. Raha ny marina, raha tsy mianatra mifampiresaka soa aman-tsara izy dia hampiseho fanahiana be, adin-tsaina ary ho mahery setra amin'ny olona sy ny biby fiompy. Rehefa vanin-taona mafana izy ireo misy alika lasa somary milay miaraka amin'ny hafa, ny vahaolana dia ny fanamaivanana ny biby ary mijanona tsy ho mahery setra amin'ny vehivavy amin'ny hafanana na alika hafa amin'ny lahy na vavy.
Fikarakarana fototra ny Yorkshire Terrier
Inona no hatao raha masiaka amin'ny fianakavianao sy ny olon-kafa ny terra Yorkshire?
Ity no iray amin'ireo sakana lehibe indrindra tsy maintsy resena raha tiantsika ny hijanona ho ampahany ao amin'ny fianakaviana ny fiompiana, ny fahasosorana amin'ny olona, ​​na fianakaviana na antoko fahatelo no olana lehibe. Amin'izay mila mamantatra lafin-javatra sasantsasany izay hanampy anao hamaha azy ianao.
Raha miaro tena ny alika rehefa manatona ny habakabany ianao
Fahatakarana hoe iza izy ireo ireo izay hihinanany, izay hatoriany na hilalaovany matetika. Raha rehefa manakaiky izy dia mimenomenona izy, aza mikiakiaka, mikapoka na manasazy azy satria miaro ny toerany izy, ny tsara indrindra dia ny mampihatra teknika fanamafisana tsara, ireo izay mankatò fototra koa dia tena ilaina mba hanampiana azy hanatsara izany fihetsika izany. Io tahotra io indray dia mahatonga ny alika hanao fihetsika tsy mendrika noho ny trauma, miaraka amin'ny olona manokana na amin'ny olona amin'ny ankapobeny, na avy amin'ny tontolo iainany izy ireo na tsia.
Raha mampijaly ny alikanao ianao dia kapohy izy ary akorao izy, rehefa mandeha ny fotoana dia ho lasa mahery setra tsy ho kivy aminao sy ny fianakavianao izy. Tsy azo ekena fa mampiroborobo fitondrantena ratsy amin'ny fomba toy izany ianao. Azonao atao ny mametaka ny alikao ny fitaintainana amin'ny fihenjanana vetivety amin'ny olona akaiky anao, dia ianao io. Ka rehefa mibontsimbontsina sy miziriziry amin'ny alika na olona hafa izy dia tsara kokoa ny miala eo amin'ilay toerana hialana amin'ny hiafaranao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana no hampiofanana Yorkshire mahery setra
Ny alika dia miteraka andrasana lava indrindra
Ahoana no hampiakarana ny sofin'ny totozy Prague?